ဆက်ဆီကျပြီး ချစ်စရာကောင်းလွန်းလို့. နာမည်ကြီးနေတဲ့ လေယာဉ်မယ်လေး | Myanmar Cele
Home News ဆက်ဆီကျပြီး ချစ်စရာကောင်းလွန်းလို့. နာမည်ကြီးနေတဲ့ လေယာဉ်မယ်လေး
လေယာဉ်မယ်တစ်ယောက်ရဲ့အလှအပနဲ့ဆွဲဆောင်မှုဟာ၊လေယာဉ်Airline companyတွေရဲ့Imageကိုအတော်အထောက်ကူပြုပါတယ်။ဒါကြောင့်လေယာဉ်မယ်တွေကို၊ချောမောလှပပီးပညာတတ်တဲ့မိန်းခလေးတွေပဲရွေးချယ်ကြသည်မဟုတ်ပါလား။ယခုဖော်ပြမဲ့ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံက၊TigerAirဆိုတဲ့Airlineကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့၊Rita Kaoဆိုတဲ့အမျိုးသမီးဟာ၊သူမရဲ့ချစ်ရာကောင်းတဲ့အရုပ်မလေးလိုမျက်နှာပိုင်ဆိုင်ထားတာကြောင့်၊အမျိုးသားထုကြီးရဲ့နှလုံးသားကိုဆွဲဆောင်နေခဲ့ပါတယ်။
Ritaဟာsocial mediaမှာလဲနာမည်ကြီးနေပီး၊သူမရဲ့Instagramမှာဆိုရင်followerပေါင်း(520k)ကိုပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။သူမရဲ့Istagramမှာတင်ထားတဲ့ပုံတွေဟာဆိုရင်၊နိုင်ငံပေါင်းစုံခရီးသွားတဲ့ပုံအများအပြားတင်ထားတာတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူမဟာအလုပ်နားတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်၊အများဆုံးအနားယူတဲ့နေရာလေးက၊ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ဟောင်ကောင်မြို့တွေမှာအများဆုံးအနားယူလေ့ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ Instagramကသူမရဲ့followerတွေဟာဆိုရင်၊သူမကို’Once -in- a-thousand-year beauty’ဆိုပီးတင်စားခဲ့ကြပါသေးတယ်။
လယောဉျမယျတဈယောကျရဲ့အလှအပနဲ့ဆှဲဆောငျမှုဟာ၊လယောဉျAirline companyတှရေဲ့Imageကိုအတျောအထောကျကူပွုပါတယျ။ဒါကွောငျ့လယောဉျမယျတှကေို၊ခြောမောလှပပီးပညာတတျတဲ့မိနျးခလေးတှပေဲရှေးခယျြကွသညျမဟုတျပါလား။ယခုဖျောပွမဲ့ထိုငျဝမျနိုငျငံက၊TigerAirဆိုတဲ့Airlineကုမ်ပဏီတဈခုမှာတာဝနျထမျးဆောငျနတေဲ့၊Rita Kaoဆိုတဲ့အမြိုးသမီးဟာ၊သူမရဲ့ခဈြရာကောငျးတဲ့အရုပျမလေးလိုမကျြနှာပိုငျဆိုငျထားတာကွောငျ့၊အမြိုးသားထုကွီးရဲ့နှလုံးသားကိုဆှဲဆောငျနခေဲ့ပါတယျ။
Ritaဟာsocial mediaမှာလဲနာမညျကွီးနပေီး၊သူမရဲ့Instagramမှာဆိုရငျfollowerပေါငျး(520k)ကိုပိုငျဆိုငျထားပါတယျ။သူမရဲ့Istagramမှာတငျထားတဲ့ပုံတှဟောဆိုရငျ၊နိုငျငံပေါငျးစုံခရီးသှားတဲ့ပုံအမြားအပွားတငျထားတာတှရှေိ့ရမှာဖွဈပါတယျ။သူမဟာအလုပျနားတဲ့အခြိနျမှာဆိုရငျ၊အမြားဆုံးအနားယူတဲ့နရောလေးက၊ထိုငျးနိုငျငံနဲ့ဟောငျကောငျမွို့တှမှောအမြားဆုံးအနားယူလရှေိ့တယျလို့သိရပါတယျ။ Instagramကသူမရဲ့followerတှဟောဆိုရငျ၊သူမကို’Once -in- a-thousand-year beauty’ဆိုပီးတငျစားခဲ့ကွပါသေးတယျ။
Next articleကိုဗစ်ရောဂါပိုးကူးစက်ခံရပြီး အခြေအနေမကောင်းတော့ပဲ အောက်စီဂျင်အရမ်းလိုအပ်နေတဲ့ ပိုင်တံခွန်ရဲ့မိခင်